Indlu esemaphandleni eyakhiwe ngamaplanga - 'Indlu Yobugcisa' kunye negadi - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni eyakhiwe ngamaplanga - 'Indlu Yobugcisa' kunye negadi
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBonita
Ngaphandle kwePaki yeSizwe yaseScottish kunye ne-6mins yokuhamba ukusuka elwandle yiCedarbank Studio's Yewtree Cottage.
Indlu enegumbi elinye eligcwele ubugcisa. Sinabaculi abasixhenxe kwaye bonke bafundisa izifundo.
Ihleli egadini yayo, i-Yewtree ibonelela ngangaphaya kokuva nje ngo-Airbnb.
Lithuba lokuphuma phandle kwaye wonwabele iArgyll, ufunde into entsha okanye wenze eyakho into.
Sisiseko esincinci esithambileyo-esinethemba lokuba uyakukonwabela ukufowunela ekhaya ngelixa undwendwela iArgyll
Uya kusetyenziselwa ngokupheleleyo i-cottage enendawo eninzi yokugcina iimpahla, iibhayisikili, izixhobo zobugcisa kunye nezixhobo zangaphandle.
I-Wifi yasimahla kunye ne-Freeview TV, iincwadi kunye nemidlalo yebhodi iqinisekisa ukuba kukho iinketho ekupheleni kosuku okanye ukuba usuku lucwangcisiwe.
I-Yewtree inikwe ibhedi ekhululekileyo yenkosi okanye iibhedi ezimbini ezingatshatanga (ndazise nje into ongayikhetha xa ubhukisha.) Isofa esezantsi kwigumbi lokuhlala inokuguqulwa ibe yindawo yokuphumla ye-chaise okanye ibhedi eyodwa - ke ngokutyhala, indlu iya kuhlala ezintathu.
Ikhitshi linefriji, isitovu, ioveni, itoaster, iketile kunye nemicrowave. Kukho izinto ezomisiweyo ekhabhathini nazo - ukuba kunokwenzeka.
Kukho ibhafu kunye neshawa kwi-cottage kwaye yonke ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe, okwenza ukuhlala kwakho kube lula kangangoko kunokwenzeka.
Uyakhuthazwa ukuba usebenzise igadi, izolile kwaye iyindawo egqibeleleyo yokutyela ngaphandle. Igadi ebiyelweyo igcina inja yam ngaphakathi, kodwa andiyazi eyakho ke qiniseka ukuba wonwabile phambi kokuba ukhuphe umhlobo wakho oxabisekileyo.
(Kuyacaca ukuba kufuneka uqinisekise ukuba igadi igcinwa icocekile.)
I-Yewtree yindlu entle ezolileyo, indawo egqibeleleyo yokubalekela kwihlabathi.
4.94 · Izimvo eziyi-108
Ifakwe ekupheleni kwendlela yokuhlala ezolileyo ngaphakathi kwemizuzu emi-6 ukuya elunxwemeni nakwiivenkile zekofu eKirn. Imizuzu emi-2 ngemoto ukuya elunxwemeni okanye imiz emi-5 ukuya kwidolophu yaseDunoon.
Umbuki zindwendwe ngu- Bonita
Bonita Ellmore is watercolour and oil painter working from Cedarbank Studio.
"I've always loved the sea and living by it. I keep a small sailing boat in the Holy Loch, paddle my kayak or canoe on the lochs and walk my dog along the beaches."
"I've always loved the sea and living by it. I keep a small sailing boat in the Holy Loch…
Ungeno lwephedi yezitshixo lunika inkululeko epheleleyo kwizitshixo. Ndifowne nje qha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kirn